Anti-Static seamless malefaka malefaka malefaka panty vehivavy panty
Double-Layer fehikibo lamba rakotra lamba mipetraka eo andilana. Tsy misy mihodina na mivondrona, tsy misy famoretana fa miforitra tanteraka. Ny atin'akanjo avo lenta dia manome fanohanana ny vavony antonony ary mampihena ny fisehoan'ny tampony muffin. Ny fehikibo elastika malalaka dia mampihena ny fisehoan'ny tampony muffin, ary ny fandrakofana miverina feno dia mampiseho tsara ny valahany.
Vehivavy Sexy Satin Ice Silk atin'akanjo Vehivavy pataloha renda milamina
DESIGN COLORS LEHIBE LEHIBE & Lavorary FIT - Ny atin'akanjo vehivavy fohy dia manome endrika mendri-piderana miaraka amina fandrakofana mety amin'ny akanjo rehetra. Panty mamelatra landihazo, tsy misy paingotra, tsy mihodinaTsy misy Bunching Ny fisokafan'ny tongotra-voaporofo, mijanona amin'ny toerany tontolo andro, ny landihazo dia manana Permeability tsara izay mitazona anao ho maina sy maina.
Masinina maivana manasa WOMens panties mahafatifaty ho an'ny fampiofanana / Athletic
Fonosana atin'akanjo karazana akanjo maivana isan-karazany dia misy loko mainty, fotsy, volondavenona, miboridana / beige, loko manga navy hisafidianana. maka panty kitapo manao comfortsoft miafina ny vatanao.
Fampaherezana panties tsara indrindra ho an'ny zazavavy / tovovavy / tovovavy. tonga lafatra amin'ny fanatanjahan-tena, atletisma, fanatanjahan-tena, fitsangatsanganana, gymnastika amin'ny ririnina na fahavaratra, fanoherana ny fofona ary ny teknolojia fampandehanana hamandoana, mitazona anao ho vaovao sy mahatsiaro ho maina mandritra ny andronao.